Nhau - Kuongororwa kwenzvimbo yekusimudzira yemusika weindasitiri yekugadzira indasitiri mu2020
Inotungamirwa nekusimudzira hupfumi hwepasirese uye kudiwa kwemusika, indasitiri yemitoro yenyika yangu yakawedzera nekukurumidza mumakore gumi apfuura, uye kudiwa kwemusika kuri kuwedzera kwaunza makambani mazhinji emitoro munzira yekukurumidza kukura. Kubva pakuona kwebhizimusi modhi, yepamusha mukwende musika bhizinesi modhi iri kunyanya ODM / OEM, uye maindasitiri ngetani yakanangana nekukwira kumusoro kwezviwanikwa uye pakati pekutangisa. Kubva pamaonero eiyo indasitiri chiyero chekutengesa, mari yekutengesa yemakambani akasarudzwa emitoro mu2019 yaive 141.905 yuan yuan, kuderera kwegore-pagore kwe1.66%. Kubva pakuona kwehukuru hweiyo musika wemikwende, musika wemitoro wenyika yangu mu2019 ungangoita mazana maviri nemakumi maviri nemashanu emamiriyoni emadhora, kuwedzera kwe22.64% gore-ne-gore, uye huwandu hwekukura huri pamberi pasirese. Kubva pakuona kwekuvandudzwa kwenzvimbo yeindastiri, indasitiri yemitoro yeChina yakagadzira zvakanyanya mumatunhu emahombekombe eGuangdong, Fujian, Zhejiang, Shandong, Shanghai, Jiangsu, uye mukati megungwa Hebei neHunan. Iyo indasitiri yemitoro ikozvino yakaumba iyo Huadu, Guangdong, Industrial masumbu muPinghu, Zhejiang uye Baigou, Hebei.
China inogadzira zvikuru mukwende, kunyanya ODM / OEM
Mikwende inowanzo shandiswa yemidziyo yekuchengetera chishandiso chekufamba kwedu kwezuva nezuva. Inotungamirwa nekusimudzira hupfumi hwepasirese uye kudiwa kwemusika, indasitiri yemitoro yenyika yangu yakawedzera nekukurumidza mumakore gumi apfuura. Kuwedzera kuri kudiwa kwemusika kwaunza akawanda emakambani emitoro munzira yekukurumidza yeBudiriro. China indasitiri yemitoro yakatonga pasi rose, kwete chete nzvimbo yepasi rose yekugadzira, asiwo musika wepasi rose wevatengi. Seye anotungamira pasi rese anogadzira mukwende nemabhegi, China ine zviuru zvevagadziri vemikwende uye inogadzira chinenge chikamu chimwe muzvitatu chemikwende nemasaga epasi, uye mugove wayo wemusika haugone kutarisirwa pasi.
Kubva pakuona kwebhizimusi modhi, musika wemikwende wepamba unokwikwidza zvakanyanya, bhizinesi modhi iri kunyanya ODM / OEM, uye cheni yeindasitiri yakanangana nepamusoro pemidziyo uye pakati pekutangisa. Vatambi vemakambani venyika yangu indasitiri yekugadzira mukwende vari kugadzira vagadziri, vagadziri vane hunyanzvi uye vanoshandisa brand. Parizvino, mazhinji emitoro nemabhegi emabhizinesi munyika yangu akaiswa mukugadzirisa vagadziri. Mabhizinesi akadaro anowanzo kuve madiki mumwero uye muhombe muhuwandu, iine yakaderera yakawedzera kukosha yezvigadzirwa uye nemakwikwi anotyisa emusika. Nyanzvi dzekugadzira dzakakura pamwero, dzine mamwe maR & D uye ekugona kugona, uyezve vanochengetedza yavo yega zvigadzirwa. Nhumbi dzechigadzirwa zvigadzirwa vanoshanda vanonyanya kubva kunze kwenyika, kugona iyo R&D, dhizaini uye zvekutengesa zvinongedzo neepamusoro chigadzirwa chigadzirwa margins.
Iko kukurumidza kukura kwemusika, iyo yekukura mwero inotungamira pasirese
Kubva pakuona kwemaindasitiri ekutengesa mari, mukwende ndechimwe chezvikamu zvidiki zveiyo huru indasitiri yeganda. Sekureva kwedata rakaburitswa neChina Leather Association, kusvika pakupera kwegore ra2018, paive nemakambani emitoro anokwana 1,598 munyika yangu, nemari yekuwedzera yekutengesa yemabhiriyoni zana nemakumi mashanu ane mapfumbamwe emakumi mapfumbamwe nemana emabhiriyoni, gore-gore -kuwedzera kwe2,98%. Muna 2019, mari yekutengesa yemakambani anotakura zvinhu pasi pemitemo yaive 141.9055 yuan, kudzikira kwegore-ne-gore kwe1.66%.
Kubva pakuona kwehuremu hwese hweiyo indasitiri yemitoro, musika wemitoro wenyika yangu wakakura uye wanga uri munguva yekuwedzera kumhanyisa mumakore apfuura. Sekureva kwehuwandu hweEuromonitor, kubva muna2012 kusvika 2019, saizi yemusika wenyika yangu inowedzera kubva pa130.2 bhiriyoni yuan kusvika pa253 bhiriyoni yuan, iine huwandu hwepakati pagore hwekukura kweiyo 9.96%, iri pamberi peyekukura kwepasirese.
Simba rekugadzira indasitiri rakanyanyisa, uye masumbu emabhizimusi ari pachena
Zvinoenderana nedunhu rematunhu, China yemakambani indasitiri yakagadzira zvakanyanya mumatunhu emahombekombe eGuangdong, Fujian, Zhejiang, Shandong, Shanghai, Jiangsu, uye mukati megungwa Hebei neHunan. Semugadziri wemitoro wepasirese wepasi rose, zvigadzirwa zveChina zvinotakura zvinhu zvakagadzirwa nematunhu masere izvi zvinopfuura makumi masere muzana emugove wemusika wenyika. Mukupesana kwakanyanyisa, kuvandudzwa kwemaindasitiri emitoro munzvimbo dzakakura dzepakati nekumadokero kuri kusarira kumashure zvakanyanya.
Kubva pakuona kwenzvimbo dzekugadzira, huwandu hwekugadzira hwemumba hunonyanya kuiswa mumatatu makuru ekutakura zvinhu achiunganidza nzvimbo dzeShiling kuGuangdong Huadu, Pinghu muZhejiang, uye Baigou muHebei; panguva imwechete misika yehunyanzvi senge Haining Leather Guta, Shanghai Hongkou Leather Center, uye Guangzhou Leather City vakazvarwa. . Idzi nzvimbo dzekuunganidza dzinoverengera nezve 70% yemutoro wenyika yangu inoburitsa kukosha.
Iyi data iri pamusoro inouya kubva ku "China Bag Kugadzira Indasitiri Kugadzira uye Kutengesa Kudiwa uye Investment Forecast Kuongorora Chirevo" neQianzhan Viwanda Research Institute. Panguva imwecheteyo, iyo Qianzhan Industry Research Institute inopa mhinduro dzemahombekombe makuru data, kuronga kwemaindasitiri, kuzivisa kwemaindasitiri, kuronga kwepaki kwemaindasitiri, uye kusimudzira kwekudyara kwemaindasitiri.